Xeerarka Yandex: gaarsiinta cuntada aan duuliyaha lahayn ee Moscow | TeraNews.net
Xeerarka Yandex: gaarsiinta cuntada aan duuliyaha lahayn ee Moscow
qoraaga Kravetz Pavel La daabacay 09.12.2020
In kasta oo agaasimayaasha aflaanta khiyaaliga ah ee sayniska aysan si uun u go’aansan karin sida cuntada loogu geeyo macaamiisha, Yandex wuxuu u dhaqaaqay ficil. Xusuusnow filimka "Cunsurka shanaad", halkaas oo jilaaga ugu weyn ee cuntada lagu geeyo markab duulaya? I rumee, si dhakhso leh ayaan u awoodi doonnaa inaan sameyno wax la mid ah.
Gaarsiinta raashinka aan duuliyaha lahayn ee Moscow
Waxay u egtahay, dabcan, qosol - gaarsiinta cuntada aan duuliyaha lahayn ee Moscow. Dadka Mareykanka iyo reer Yurub waxay qiyaasayaan Ruushka oo wata orso ku socota waddooyinka. Ka dibna gaarsiinta cuntada aan duuliyaha lahayn ee Moscow, iyo xitaa nooc ka mid ah Yandex. Kaftanku wuu dhamaaday. Ruushku waxay ku qabsadeen hindisaha horumarinta tiknoolajiyada IT-ga gacmahooda.
Iyadoo ay u egtahay wax aad u qoyan. Baabuur aan cidi wadin oo cabbirka baabuurka raadiyaha ah ayaa AI ku dhexwadeysaa waddooyinka magaalada. Waxa kale oo jirta fursad lagu qosli karo abuureha - mashiinku ma yaqaan sida loo qaato xadka. Caymiskuna waa daciif yahay. Laakiin qorshahani wuxuu durbaba tijaabinayaa qaabka cunugga macaamiisha ah loo gaarsiiyo cunno. Gaarsiinta raashinka aan duuliyaha lahayn ee Moscow waa tallaabada ugu horreysa. Shabakadaha bulshada dhexdeeda, qaabka amarada loogu soo gudbiyo hawada horay ayaa si dhab ah looga hadlay.
Waxaa jira kalsooni buuxda in sanadka 2021 uu noqon doono bar-tilmaameedka Russia. Dalkii, oo 5 sano ka hor loo haystay taariikhi hore, si la yaab leh ayuu dambas uga kacay. Tilmaamayaasha ugu wanaagsan adduunka ee wax soo saarka, teknoolojiyada IT-ga, qalabka militariga iyo daawada. Xitaa gaarsiinta cuntada aan cidina wadin waa mid fiican, laakiin wali Ruushka ayaa ka horeeya. Sida dayax gacmeedkii ugu horreeyay ee macmal ah, ninka ku jira hawada sare, iwm.
Sidoo kale akhri
Sawirrada Google waxay ballaariyaan shaqeynta adeeggeeda
Daabacaha 3D - waa maxay, sababta loogu baahan yahay
Waxaa fiican in la dhaqo sagxadaha - dooro qalab iyo qalab
Viber, Telegram iyo WhatsApp ayaa maamula waraaqaha
Dallada laalaaban karo ee Xiaomi Zuodu - dalab aad u wanaagsan oo ah $ 20
Immisa lacag ah ayaad u baahan tahay si aad ugu dallacdo LGA 1700
IIIF150 R2022 taleefanka casriga ah - baabuur gaashaaman mar walba
Ugoos AM7 Smart TV - iibku wuu bilaabmay
Sida loo doorto garaafka shaashadda TV-ga
Ciyaarta kombiyuutarka ee CHUCHEL (Scarecrows)
18 white Porsche 911 GT3 2015 sano oo aan socon
Magacyada ragga ugu daacadsan adduunka
Sida loo naaquso iidhehyada YouTube-ka ee TV-ga
TV BOX VONTAR X3: waa shaqaalaha ugu miisaaniyad badan sanadka 2020
Calanka cusub ee Beelink GT-King (Amlogic S922X) dib u eegis buuxa
MUAMIJINTA: tarjubaan luqado badan ku hadla
TV-box nVidia Shield TV Pro 2019: dib u eegis, sharraxaad
Sidoo kale akhri:
Wadashaqeynta, fadlan la xiriir: teranews.net@gmail.com
NUM 2021 - Teranews. Dhamaan Xuquuqda Ayaa Leh.
Naqshadda Websiteka: Sitepro